Coordinates: 43°46′23″N 79°30′13″W﻿ / ﻿43.77306°N 79.50361°W﻿ / 43.77306; -79.50361
York University (YU) waxa ay ku taala magaalada Toronto, Ontario, Kanada. Jaamacadda York (Faransiiska: Jaamacadda York) waa jaamacad cilmibaaris dadweyne oo ku taalla Toronto, Ontario, Canada. Waa jaamacadda saddexaad ee ugu weyn Canada.  Jaamacadda York waxay leedahay qiyaastii 52,300 arday, 7,000 macalin iyo shaqaale, iyo 295,000 oo ka mida ardayda ajnebiga ah ee caalamka. Waxay leedahay kow iyo toban jimicsi, oo ay ka mid yihiin Kulliyadda Farshaxanka Farshaxanka & Xirfadaha Shaqada, Farsamada Sayniska, Dugsiga Lassonde School of Engineering, Schulich School of Business, Osgoode Hall Law School, Glendon College, Faculty of Education, Faculty of Health, Farsamada Waxbarashada Deegaanka, Kulliyadda Cilmi-baadhista Jaamacadda, Dugsiga Farshaxanka, Warbaahinta, Fulinta iyo Naqshadaynta (horeyna Kulliyadda Farshaxanka Fine), iyo 28 xarumo cilmi-baaris. Xarunta Keele iyo Xarunta Xarunta Markham ee mustaqbalka waxay sidoo kale guriga ku yaallaan goobaha dayax-gacmeedka ee College of Seneca.
Jaamacadda York ayaa la aasaasay sannadkii 1959-kii oo ah jaamacad aan ku dhisnayn sharciga jaamacadda York,  kaas oo helay Assent Royal ee Golaha Sharciga ee Ontario bishii 26 Maarso sanadkan. Fasalkiisii ​​koowaad waxaa la qabtay Sebtembar 1960-dii Falconer Hall oo ku yaalla Jaamacadda Toronto oo leh 76 arday.  Deyrtii 1961, York wuxuu u guuray xeradii ugu horeysay, Glendon College, wuxuuna bilaabay inuu xooga saaro farshaxanka muusikada iyo waxbarashada dadka waaweyn oo waqti dhiman ah.  Sanadkii 1965, jaamacaddu waxay furtay xarun labaad, Xarunta Keele ee Waqooyiga York, oo ku dhex taal jaaliyada deriska ee York Heights.
Qaar ka mid ah barnaamijyada York waxay heleen aqoonsi muuqda labadaba qaranka iyo caalamkaba. York wuxuu ku yaallaa Dugsiga ugu da'da weyn ee Canada,  kaas oo lagu sifeeyey mid ka mid ah kuwa ugu fiican Kanada,  iyadoo la aqbali karo oo la barbardhigayo Dugsiga USC ee Arts Cinematic Arts iyo Tisch School of Arts. Dugsiga Osgoode Hall Law School ayaa kaalinta labaad kaga jira Canada, ee ku yaal liiska Macallinka ee 2012 ee dugsiyada Kanada ee caadiga ah.  Schulich Dugsiga Ganacsiga ee York wuxuu ku guulaystay kaalinta sagaalaad ee adduunka, iyo kan ugu horreeya ee Canada,  iyo barnaamijka MBN Expansion ee barnaamijyada MBA, Schulich wuxuu ku jirey kaalinta 18-aad adduunka, isagoo markii ugu horeysay Canada. 
Labaatan sano ee ugu dambeysey, York wuxuu noqday xarun farsamo shaqaale leh dhowr macalimiin iyo dhacdooyin kale oo dhaca,      oo ay ku jiraan shaqo joojinta jaamacadaha ugu dheer taariikhda Kanadiyaanka ee 2018
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=York_University&oldid=179398"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 1 Sebteembar 2018, marka ee eheed 14:18.